Yaa ka dambeey is hortaagii Safarka Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ee Beledweyne - Awdinle Online
Yaa ka dambeey is hortaagii Safarka Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh ee Beledweyne
November 10, 2019 (Awdinle Online) – War hada nooga yimid garoonka diyaaradaha aadan cadde ee xamar ayaa sheegaya in la fasaxay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed oo goor hore saaka lagu xanibay garoon diyaaraddaha muqdisho.
Labada mas’uul oo hore usoo noqdey madaxweyneyaal oo ay wehliyaan xildhibaanno iyo mas’uuliyiin ka tirsan Madasha Xisbiyada mucaaradka ah ee looga dhawaaqay xamar ayaa ku sii jeeda magaalada Beledweyne.
Maamulka garoonka ayaa labada mas’uul iyo xubnaha wafdiga Madasha mucaaradka waxay saaka markii ay garoonka tageen ku war-geliyeen in aysan diyaaradooda ka duuli karin garoonka, ayada oo qiil looga dhigtay in garoonka Beledweyne arimo farsamo oo dhan hawada iyo degidaba ay jiraan.
Si kastaba, wada-hadal ayaa wafdiga la fasaxay, waxaana ay hadda ku sii jeedaan magaalada Beledweyne.
Dhinaca kale, Ra’iisul wasaraaha Soomaaliya Xasan Kheyre ayaa ka baaqday safar la qorsheeyey inuu isna maanta ku tago magaalada Beledweyne, sida ay xubno ka tirsan xafiiskiisa u xaqiijiyeen warfidiyeenka.
Dib u dhaca safarka Ra’iisul Wasaaraha ayaan weli la sababeyn, hase ahaatee waxaa laga ayaabaa baa la yiri in kheyre uu dhibsadey Madaxweyneyaashii hore iyo raga mucaaradka ah ee tegeya Beledweyne.
Saraakiisha Amniga garoonka aadan cadda ayaa lagu waramayaa in ay si toos ah ugu lahaayeen arinta is hor istaaga ah ee lagula kacay madaxweyneyaashii hore.
Sida muuqata waxaa jiraan waxyaabo badan oo isburinaya, sida, sababta Kheyre ku baaqday oo diyaaraddiisa ay garoonka Beledweyne uga dagi karin balse diyaaradda madaxdii hore ay uga degeyso.
Waxaa sidoo kale is weydiin mudan sababta maamulka garoonka isu hortaagey safarka Madaxweyneyaashii hore.
Previous articleDhageyso :-Biyo Badan Oo Buux Dhaafiyay Isbitaalka Degmada Bardaale
Next articleMaa Maxay Sababtii Loo Xayiray Safarkii Madaxweynayaashii Hore Ka Dibna La Fasaxay